Henanom na Ɛrebubu Tete Osiakwan No
ASƐM A ƐDA SO | KASA NYƐ OSIAKWAN BIO
Tete Osiakwan no Rebubu
KASA a nkurɔfo ka no wiase yɛ buburugyaa. Wobu akontaa sɛ kasa ahorow ahorow bɛyɛ 7,000 na ɛwɔ wiase. Ɛtɔ da a na wei adan osiakwan; ɛma akwantu, aguadi, nhomasua ne amammu mpo yɛ bisibasaa. Ɔhaw yi fii ase nyɛ nnɛ. Ɔhene Ahasweros (ebia ɔno na wɔsan frɛ no Xerxes I) bere so, bɛyɛ afe 2,500 a atwam ni no, Persiafo de ɔhene no mmara kɔɔ ahemman no nyinaa mu, “fi India kosi Etiopia. Na ne nyinaa yɛ amantam bɛboro ɔha aduonu ason, na wɔkyerɛw no sɛnea ɔman biara nkyerɛwee ne wɔn kasa te.” *
Ɛnnɛ, aban anaa ahyehyɛde kakraa bi na ɛbɛbɔ wɔn ho mmusu ayɛ saa adwumasono yi. Nanso ahyehyɛde bi afa ato ne ho so sɛ wɔbɛyɛ. Wo deɛ hwɛ, Yehowa Adansefo kyerɛ Bible ne nhoma ne video ase kɔ kasa bɛboro 750 mu. Kasa yi mu bɛyɛ 80 yɛ mum kasa. Na wokɔ Intanɛt so a, nhoma ne nneɛma foforo pii wɔ hɔ a wubetumi abɔ atie wɔ kasa pii mu. Wɔn a wɔn ani afura nso wɔ wɔn deɛ wɔ Braille mu.
Nea ɛyɛ anika koraa ne sɛ Yehowa Adansefo mfa saa adwuma no mpɛ sika. Wɔn a wɔkyerɛ nhoma ase no atu wɔn ho ama reyɛ saa adwuma no. Ɛdɛn paa na epusuw wɔn ma wɔkyerɛ kasa pii ase saa? Wɔyɛ no sɛn?
^ nky. 3 Hwɛ Ester 8:9 wɔ Bible mu.